दाहाललाई आफ्नैको दबाब » खबरहरुको एउटै केन्द्र
दाहाललाई आफ्नैको दबाब
सोमबार, बैशाख ३, २०७५ ०६:५१ मा प्रकाशित !
भोटेकोसीकिनारको ‘सुकुटे बीच’ र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सम्बन्ध अनौठो छ। राजनीतिक तनाव भयो कि, दाहाल ‘रिफ्रेस’ हुन हरेक पटक सुकुटे पुग्ने गर्छन्। यसपटक पनि दाहाल तनाव साम्य पार्न आइतबार सुकुटे पुगेका छन्। यो खबर चिरञ्जीवी ढुंगाना/नरेन्द्र साउदले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।
पार्टी एकताबारे छलफल गर्न एमालेले यसै साता पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको छ। माओवादी नेता मणि थापाले भने वैशाख ९ गते नै एकता घोषणा गर्न आवश्यक गृहकार्य पूरा हुने सम्भावना नरहेको बताए।
PREVIOUS POST Previous post: यस्ता छन् आजका पत्रपत्रिकाका सम्पादकीय
NEXT POST Next post: आज चीन जाँदै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते सोमबार, बैशाख ३, २०७५ ०६:५१
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस सोमबार, बैशाख ३, २०७५ ०६:५१
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण सोमबार, बैशाख ३, २०७५ ०६:५१
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी सोमबार, बैशाख ३, २०७५ ०६:५१
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? सोमबार, बैशाख ३, २०७५ ०६:५१